ခရီးသွားဖို့ ဘာတွေပြင်ဆင်ကြမလဲ ? – MyStyle Myanmar
ခရီးသွားဖို့ ဘာတွေပြင်ဆင်ကြမလဲ ?
များမကြာမှီမှာ သီတင်းကျွတ်ကျောင်းပိတ်ရက်တွေ ရောက်တော့မယ်ဆိုတော့ ခရီးထွက်ဖို့ ပြင်နေကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ခရီးသွားတဲ့အခါ တစ်ယောက်တည်းသွားတာကတော့ ပိုပြီးလွတ်လပ်တယ်၊ ပိုပြီးထိရောက်တယ်လို့ ထင်ကြပေမယ့် အဖော်လေးနဲ့သွားတဲ့အခါကျရင်လည်း ကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေ အများကြီးပါ။ ဒီတော့ ခရီးသွားမယ့်အခါ ဘာတွေလုပ်သင့်လဲ၊ မလုပ်သင့်ဘူးလဲ ဆိုတာကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ ခရီးဖော်ကို ကိုယ်နဲ့သဟဇာတဖြစ်နိုင်မယ့် သူကိုရွေးပါ။
ခရီးသွားဖော် ရွေးတဲ့အခါ ကိုယ်နဲ့စရိုက်ချင်းတူတဲ့သူ၊ ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေနိုင်မယ့်သူ၊ ကိုယ်နဲ့တူတူ ခရီးသွားရတာကို နှစ်သက်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ မဟုတ်ရင် ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်က ပျော်စရာမကောင်းဘဲ စိတ်ညစ်နေရမှာပါ။
၂။ ကုန်ကျမယ့်စရိတ်ကို ကြိုတင်တွက်ချက်ထားပါ။
ဒီအချက်ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့အတူ ခရီးသွားမယ့်သူနဲ့ပါ တူတူထိုင်ပြီး တိုင်ပင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါ။ ဟိုတယ်စရိတ်၊ ကားစရိတ်၊ အစားအသောက်စရိတ်၊ တစ်နေ့ကို ဘယ်လောက်သုံးမယ်ဆိုတာမျိုးကိုပါ သေချာဆွေးနွေးတိုင်ပင်ထားရင် အပိုကုန်တာမျိုး မဖြစ်တော့ပါဘူး။
၃။ သွားလည်မယ့်နေရာတွေကို ကြိုတင်တိုင်ပင်ပါ။ သွားမယ့်နေရာအကြောင်းကို ကြိုတင်လေ့လာပါ။
ဟိုရောက်မှ စုံစမ်းပြီးသွားတာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။ ကိုယ်သွားမယ့်နေရာကို တိုင်ပင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ အဲ့နိုင်ငံ (သို့မဟုတ်) အဲ့နေရာရဲ့ ထူးခြားတဲ့၊ နာမည်ကြီးတဲ့ နေရာတွေကို ကြိုတင်စုံစမ်းထားပါ။ ကစားကွင်းလိုမျိုး၊ Aquarium တို့၊ Museum တို့လိုမျိုးသွားမယ်ဆိုရင် ဝင်ကြေးတွေ ကြိုတင်စုံစမ်းပါ။ ဘယ်ရက်မှာ ဘယ်နေရာသွားပြီး ဘာလုပ်မယ်၊ အဲ့လို Plan လေးကြိုဆွဲထား။ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါ။
၄။ Technology ကနေ ခဏတာရုန်းထွက်လိုက်ပါ။
အားလုံးကတော့ ဖုန်းနဲ့ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး မှတ်တမ်းတင်၊ အမှတ်တရအဖြစ် သိမ်းထားချင်ကြတာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ သဘာဝရှုခင်းတွေ၊ အလှတရားတွေ ခံစားရမယ့်အချိန်မှာတော့ ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီးရင် တဝကြီး အားရပါးရ ကြည့်ရှုခံစားစေချင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘဲ အဖော်နဲ့သွားတဲ့အခါမှာ စကားလေးတပြောပြောနဲ့ အချင်းချင်း စကားစမြည်လေးပြော၊ အတွေ့အကြုံတွေ ဝေမျှပြီးသွားတာက Facebook သုံးပြီး စကားမပြောဘဲ တိတ်ဆိတ်နေတာထက် ပိုကောင်းပါတယ်။ ရင်းနှီးမှုလည်းပိုရသလို တစ်ချိန်မှာပြန်တွေးကြည့်ရင် အမှတ်ရစရာလေး ဖြစ်နေမှာပါ။
MyStyle Myanmar ပရိသတ်ကြီးလည်း လာမယ့်ပိတ်ရက်မှာ ချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့ ခရီးထွက်နိုင်ကြပါစေနော်။
MyStyle Myanmar2018-12-21T02:36:51+06:30September 19th, 2017|Lifestyle, ခရီးသှားခွငျး – Travel|